Ethiopia Market Research Reports at MarketReportsOnline.com
Home >> Africa >> Ethiopia
Ethiopia Market Research Reports
Construction in Ethiopia - Key Trends and Opportunities to 2025 (H1 2021)
Construction in Ethiopia - Key Trends and Opportunities to 2025 (H1 2021) Summary The Ethiopian construction industry is expected to expand by 4.7% in real terms in 2021 - up from a growth rate of 3.1% in 2020. Construction ...
Ethiopia Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance
Ethiopia Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance Summary GlobalData's 'Ethiopian Insurance Industry - Governance, Risk and Compliance' report is the result of extensive research into the insurance regulatory fra...
Dec 2020 $ 950
Ethiopia: Cigars and Cigarillos Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian cigars and cigarillos market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehens...
Ethiopia: Cigarettes Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian cigarettes market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overvie...
Ethiopia: Smoking Tobacco Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian smoking tobacco market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive ov...
Ethiopia: Tea Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian tea market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of th...
Ethiopia: Cocoa Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian cocoa market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of ...
Ethiopia: Roast Coffee Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian roast coffee market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overv...
Ethiopia: Other Juices, Juice Mixtures and Smoothies Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian other juices, juice mixtures and smoothies market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It ...
Ethiopia: Grape Juice Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian grape juice market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overvi...
Ethiopia: Pineapple Juice Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian pineapple juice market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive ov...
Ethiopia: Grapefruit Juice Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian grapefruit juice market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive o...
Ethiopia: Apple Juice Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian apple juice market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overvi...
Ethiopia: Orange Juice Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian orange juice market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overv...
Ethiopia: Non-Carbonated Soft Drinks Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian non-carbonated soft drinks market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a compr...
Ethiopia: Carbonated Soft Drinks Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian carbonated soft drinks market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehen...
Ethiopia: Bottled Water Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian bottled water market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive over...
Ethiopia: Liqueurs and Cordials Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian liqueurs and cordials market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehens...
Ethiopia: Brandy Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian brandy market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of...
Ethiopia: Gin Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian gin market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of th...
Ethiopia: Rum Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian rum market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of th...
Ethiopia: Vodka Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian vodka market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview of ...
Ethiopia: Whiskey Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian whiskey market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comprehensive overview o...
Ethiopia: Cider, Perry and Rice Wines Market and the Impact of COVID-19 on It in the Medium Term
Short Description This report presents a strategic analysis of the Ethiopian cider, perry and rice wines market and a forecast for its development in the medium term, taking into account the impact of COVID-19 on it. It provides a comp...